Akụkọ - Ugogbe anya anwụ kacha mma, uwe mkpuchi, snịịka na azụmahịa ndị ọzọ (2020): ejiji oge ochie na uwe echekwara nke Retail Egg kwuru.
Oge ugogbe anya ugo kacha mma, uwe mkpuchi, sneakers na uwe ndị ọzọ (2020): Oge ejiji na uwe echekwara nke Retail Egg kwuru.
Ugogbe anya ugo kacha mma kachasị mma, mkpuchi, sneakers na uwe ndị ọzọ (2020): ejiji oge ochie na uwe echekwara site na Retail Egg
Ulo elu nke 2020 kacha mma n’oge ndi nwoke na ndi nwanyi, uwe na akpụkpọ ụkwụ, tinyere uwe elu, sneakers, ugogbe anya anwụ na ego ndị ọzọ na uwe, akpụkpọ ụkwụ na ngwa
Chọta oge ejiji kachasị mma, uwe na akpụkpọ ụkwụ na Amazon Prime Day, nke gụnyere ndị na-ewu ewu sneakers, akpụkpọ ụkwụ na-agba ọsọ, uwe, jaket, ọsụsọ, na ugogbe anya anwụ. Ejikọtara njikọ nke azụmahịa ndị a na-ewu ewu n'okpuru.
Zọpụta ihe ruru 58% na uwe elu ụmụ nwoke, jaketị na mkpuchi si ụdị ndị kachasị elu gụnyere Calvin Klein, The North Face, Carhartt na Columbia na ọrịre Amazon Prime Day
Chekwaa ihe ruru pacenti iri abụọ na abụọ na uwe elu ụmụ nwanyị, jaketị, mkpuchi na akwa agwa site na ụdị ndị kachasị dịka North Face, Steve Madden, Columbia na Calvin Klein na nkwalite ụbọchị Amazon.
Zọpụta 42% na Columbia Women's Arcadia II Jacket na Amazon-Shell top jaket nwere windshield na-agbanwe agbanwe, drawstring kemeghi hem na zippered Akpa
Zụrụ Columbia Boy's Glennaker Rain Jacket na Amazon wee chekwaa ihe ruru 43% - shei naịlị mmiri na-adịghị mma na-adịgide adịgide ma nwee ike iguzogide mmiri ozuzo na mmiri ozuzo.
Zọpụta 41% na jaket nwoke nwoke nke Ascender Softshell nke ndị Colombia na-eme na Amazon-Waterproof na ajị anụ Andean ajị bụ nke 100% polyester
Chekwaa $ 30 na Eddie Bauer Nwada Sun Valley Down Parka na Amazon mere nke 650-jupụta adịchaghị ala ala na aji ajị anụ - zipa akpa
Chekwaa ihe ruru pacenti iri anọ na asaa na ụyọkọ nke ụmụ nwanyị Columbia na-egbochi mmiri na mmiri ozuzo.
Zụrụ Ray-Ban ewepụghị oghere oval ugogbe anya maka anwụ ma chekwaa 20% na Amazon-ya na okpokolo agba na mkpuchi mkpuchi UV
Zụta Ray-Ban Women Blaze Round Slasslasses na Amazon wee chekwaa 30% -nwere okpokoro plastik na mkpuchi UV
Zoputa 50% na Ray-Ban Blaze Wayfarer ugogbe anya maka anwụ na Amazon-otu n’ime akara ngosi kachasị mma na pọtụfoliyo Ray-ban
Zụta Ray-Ban Blaze Double Bridge Square Slasslasses na Amazon wee chekwaa 47% -na-ejizi okpokoro agba nke nwere okirikiri na okpokolo agba
Zọpụta 26% na Oakley Men's Holbrook Square Ugogbe anya maka ugogbe Amazon na-enweghi mgbe ochie na-etinye teknụzụ Oakley nke oge a.
Zụta Oakley Men's Flak 2.0 nke nwere ugogbe anya maka anwụ na Amazon ma chekwaa 32% - ihe nkpuchi na-eguzogide ọgwụ dị fechaa ma dịgide, nwee ntụsara ahụ ma chebe ụbọchị niile.
Zọpụta $ 73 na Oakley Men's Valve Regular Regulasses na Amazon-valvụ ahụ bụ etiti na-eguzogide nrụgide, nke dị fechaa na nke na-adịgide adịgide, ma dịkwa mma iji eyi ụbọchị niile.
Zụta Oakley Men's Flight Jacket Rectangular Slasslasses na Amazon wee chekwaa 21% -na-enye 100% UV nchedo UVA niile, UVB, UVC na ọkụ na-acha anụnụ anụnụ na-emerụ ahụ, ruo 400mm
Zụta Oakley Women's Split Time Metal Pilot ugogbe anya maka anwụ na Amazon ma chekwaa 25% -na-enyewanye ike na mgbanwe iji guzogide ngbanwe ma ọ bụ nrụrụ
Chekwaa $ 81 na Oakley Men's Mainlink akụkụ anọ ugogbe anya maka anwụ na Amazon-ezubere maka ọnọdụ ọkụ na-enwu gbaa, na-eme ka gburugburu ebe obibi dịkwuo mma na nke okike
Zọpụta ihe ruru 44% na Nike, Adidas, New Balance, ASICS na Skechers snịịka na ahịa Amazon Prime Day
Zọpụta ihe ruru 38% na akpụkpọ ụkwụ ụmụ nwanyị, akpụkpọ ụkwụ, ikiri ụkwụ dị elu na akpụkpọ ụkwụ dị larịị na Amazon Prime Day nkwalite-pịa njikọ iji nweta ọnụahịa kachasị ọhụrụ na akpụkpọ ụkwụ ụmụ nwanyị, site na akpụkpọ ụkwụ na-eje ije na ndị na-eme achịcha
Zọpụta ihe ruru 43% na akpụkpọ ụkwụ ụmụaka na Amazon Prime Day nkwalite-chekwaa na sneakers, akpụkpọ ụkwụ, akpụkpọ ụkwụ na snịịka maka ụmụ nwoke na ụmụ agbọghọ
Zụta ndị na-agba ọsọ sneakers na New Balance, zọpụta 22% -100% akpụkpọ anụ, gburugburu gburugburu cushioning
Zuta New Balance Women's Fuelcore Nergize V1 sneakers na Amazon, chekwaa 38% -100% eriri synthetic, nkwado nkwado nkecha
Zọpụta 26% na Skechers Men's Delson Camben Sneakers na Amazon na-enweghị mmịfe, eriri n'ihu, egwuregwu na oge ezumike
Zọpụta ASICS Gel-Venture Jogging Shoes na Amazon-Premium insoles na nkwụghachi ike dị elu na njikwa oke mmiri
Zụta Skechers Ladies Go Joy Walking Shoes na Amazon ma chekwaa 40% -ịdị arọ na mgbanwe 5Gen na-anabata cushioning
Zọpụta 43% na Deer Stags Boys Oxford Akpụkpọ ụkwụ na Amazon-Soft, tight mesh lining and wingtip design
Zọpụta 44% na Fila Women's Disruptor II sneakers na Amazon nke emere nke akpụkpọ anụ na adịchaghị mkpa
Zọpụta na ASICS ladies gel adventure shoes na Amazon-pụrụ ịdabere na GEL-Venture® 7 na-agba ọsọ akpụkpọ ụkwụ nkwado ga-enye gị uru ị chọrọ maka ọ bụla na-agba ọsọ
Zọpụta 28% na Skechers Afterburn na Amazon na-adịgide adịgide na nkecha naịlọn loop lace mmechi na akwa mkpuchi ikiri ụkwụ na ire maka mgbakwunye nkasi obi
Zụta Reebok ụmụ nwanyị 'kpochapụwo akpụkpọ anụ Harman Run sneakers na Amazon ma chekwaa 23% - ndị na-agba sneakers na EVA midsole na-enye nkwado ma nwee ike ịdịgide maka ọtụtụ ịgagharị na ịgba ọsọ.
Chekwaa ihe ruru pacenti iri abụọ na ise na Steve Madden ụmụ nwoke Fenta ejiji ndị na - agba sneakers na Amazon-lace-up “ukporo sneakers” na roba ọbụ, dị na 5 kpochapụwo na agba
Zụta PUMA Women'smụ nwanyị Carina Sneakers na Amazon ma chekwaa ihe ruru 42% - ndị sneakers na-eme nke 100% akpụkpọ anụ sịntetik nwere akpụkpọ ụkwụ roba
Buyzụta New Balance Women 608V5 Casual Comfortable Cross Training Akpụkpọ ụkwụ na Amazon na-azọpụta ruo 31% -incredibly ala ọzụzụ akpụkpọ ụkwụ na niile-gburugburu kwushin
Zọpụta ihe ruru 32% na Skechers Work Cessnock sneakers na Amazon-breathable mesh na eriri bungee na eriri roba na-adịghị amị amị
Zọpụta ihe ruru pacenti iri anọ na atọ na akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ kpochapụla akpụkpọ anụ ndị nwoke Reebok na Amazon-Devid agụghị ndị gbara ịke style akpụkpọ anụ na roba Nchikota ọcha na chịngọm agba
Buyzụta N'okpuru Armor Kids 'PreSchool Na-ekwusi ike 8 ndị ọzọ na-emechi sneakers na Amazon ma chekwaa 25% na ibu dị arọ ma dị mma, yana nko na eriri aka, dị mfe iji yikwasị ma wepụ
Chekwaa ihe ruru 34% na uwe ejiji na ejiji na ụbọchị nkwalite ụbọchị Amazon - lelee azụmaahịa kachasị ọhụrụ gbasara uwe elu ụmụ nwoke, ajị ajịja, jaketị, mkpuchi, jeans, uwe ogologo ọkpa, uwe, uwe na uwe.
Chekwaa ihe ruru 40% na uwe ụmụ nwanyị na ejiji na nkwalite ụbọchị Amazon Prime-pịa njikọ iji nweta ozi kachasị ọhụrụ gbasara uwe ụmụ nwanyị, ọsụsọ, mkpuchi, jaketị, uwe, jeans, uwe ogologo ọkpa, sket, leggings, uwe, uwe ime, ụra na uwe Discount ukporo eyi
Chekwaa ihe ruru 58% na akwa ụmụaka na Amazon Prime Day nkwalite-chekwaa na jaketị, egwuregwu, pajamas na uwe maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị
Zụta Wrangler Authentics Nkasi Obi Nkasi Obi Flex Jean na Amazon ma chekwaa 20% - na-agbatị na eriri denim
Kpoo mbelata ego 35% na ngwungwu ndi nwanyi nke ndi ochichi nke ndi Amazon-6 n’ime uzo di nma
Zuta Calvin Klein Women Modern Cotton Bralette na Amazon ma chekwaa ihe ruru 41% -Bha-acha ọkụ na-acha odo odo na eriri Racerback
Zuta umu nwanyi ndi Levi di elu nke di elu na Amazon ma zoputa 40% -nọdụ ala n'úkwù ma belata site na úkwù na apata ụkwụ
Chekwaa ihe ruru 51% site na ịzụrụ onye mmeri nwoke mara mma Ederede T-uwe elu na Amazon-ya na akara ngosi C patch na aka ekpe
Zọpụta ihe ruru 33% na Levi's Women's Classic Bootcut Jeans na Amazon-nọdụ ala n'úkwù ma na-agabiga n'úkwù na apata ụkwụ.
Chekwaa ihe ruru pacenti iri anọ na otu na ọsụsọ ụmụ nwoke na-agba ịnyịnya na-agba ọsọ na Amazon-ajị anụ na-agba akwụkwọ n'èzí ma dị nro dị n'ime
Zụrụ Calvin Klein uwe elu mmiri aka na Amazon iji chekwaa ihe ruru 62% - ọ nwere nchedo UV ma jiri ya yarn dị mma iji nye ikuku na ume
Chekwaa ihe ruru pacenti iri ise na abụọ na Amazon’s Champion Women's Powerblend Boyfriend Crew-V-neck details na olu olu na uwe mara mma nke mara mma.
Na-achọ akpụkpọ ụkwụ ndị ọzọ ewu ewu na nke na-achọkarị, uwe na ejiji dị iche iche? Pịa ebe a iji chọgharịa nhọrọ azụmahịa niile na peeji nke “Prime Day” nke Amazon.
Nkwalite Daybọchị Golden Day na-adịru obere oge. Retail Egg na-enweta ọrụ maka ịzụrụ ihe site na iji njikọ enyere.
Omume ahia ahia kwa ụbọchị nke Amazon na-adịru awa 48, na-enye nnukwu ego maka ọtụtụ puku ụdị dị elu.
Have nwere otu Amazon Prime ndị otu? Bido oge ikpe n'efu n'efu 30 ugbu a wee rite uru na nkwalite ụbọchị ọ bụla.
You nwere ike ịchekwa ego buru ibu n'oge Prime Day, dị ka jaket, uwe okpomọkụ, n'elu na T-shirts, sneakers ejiji, sneakers na ngwa (dị ka elekere anya na ugogbe anya maka anwụ). Ma ị na-achọ akpụkpọ ụkwụ, uwe ma ọ bụ iko, Amazon nwere ike ọ fọrọ nke nta igbo mkpa gị. N'ime ụdị ejiji ụmụ nwanyị, ị ga-ahụ ọtụtụ uwe dị iche iche, akpụkpọ ụkwụ na ngwa. SL ejiji na BTBFM bụ ụfọdụ n'ime ọtụtụ ụdị na-enye uwe dị iche iche n'oge dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, SL Fashions 'tuxedos dị mma maka nnọkọ oriri na ọ casualụ ,ụ, nnọkọ ọfịs, oriri mmanya, agbamakwụkwọ, wdg. A na-enyekwa ngwa dịka ugogbe anya, akpa aka na elele.
Na ngalaba ejiji ndị nwoke, ị ga-ahụkwa nhọrọ dị iche iche na uwe, ọla, akpụkpọ ụkwụ na ngwa. Site na sneakers na akpụkpọ ụkwụ, ogbe achịcha na akpụkpọ ụkwụ, onye ọ bụla nwere ya. Ọ bụrụ na ị na-achọ sneakers dị elu, mgbe ahụ Adidas, Lacoste, Sperry na Tommy Hilfiger bụ ụfọdụ n'ime ha. adidas ndị sneakers Nnukwu Grandlọikpe sneakers nwere adidas mara mma nke adidas, na-eme ka ha dịgasị iche iche.
Amazon nwere nnukwu ihe omume ịzụ ahịa ya na ụbọchị ụbọchị mbụ na afọ gara aga. Ndị isi ga-enwe ike ịnwe ihe karịrị otu nde ego.
More chọkwuru uwe nwoke na nwanyị, akpụkpọ ụkwụ na ngwaahịa ejiji? Pịa ebe a iji chọgharịa usoro azụmahịa niile na peeji nke Amazon nke “Prime Day”.
Banyere Retail Egg: Retail Egg na-eketa ozi banyere azụmahịa e-commerce. Dịka onye otu Amazon Associate Retail Egg, ị nwere ike nweta ego site na ịzụrụ ihe ruru eru. Kpọtụrụ: Andy Mathews (andy@nicelynetwork.com)
Otu onye na-edekọ ego na San Francisco tụlere mkpa ọchịchị Biden na-etinye na ntinye ego na mkparịta ụka ọ bụla ya na ndị ahịa ya.
Ndị ọrụ na-etinyebeghị iwu na ikpo okwu nke JD nwere ike ịnweta Kupọns ego! Jiri kaadị Visa gị, pịa iji kwụọ ụgwọ na JD.com maka oge mbụ ma nwee ọnụ ala!
Companylọ ọrụ ahụ kwuru na Lee Kun-hee, onye wuru Samsung Electronics ka ọ bụrụ nnukwu ụlọ ọrụ zuru ụwa ọnụ na smartphones, semiconductors na TVs, nwụrụ na Sọnde mgbe ọ nọrọ n'ụlọ ọgwụ maka ihe karịrị afọ isii na nkụchi obi na Sọnde. Lee dị afọ 78 n’afọ a. Ọ mepụtara Samsung Group ka ọ bụrụ nnukwu ọgbakọ na South Korea wee bụrụ nwoke kacha baa ọgaranya na South Korea. Jeong Sun-, onye isi oche nke ụlọ ọrụ nyocha Chaebul.com, kwuru, sị: “Lee ịrị elu dị ịtụnanya nke Lee na Korea na etu South Korea si tinye ọnụ na ijikọ ụwa ọnụ bụ ihe atụ na ọtụtụ ndị Korea ga-echeta ọnwụ ya.
Harry Markopolos (Harry Markopolos), onye bụbu ọkaibe ọkachamara gbanwere onye nyocha ego aghụghọ nke onwe ya, chọpụtara atụmatụ $ 65 ijeri Bernie Madoff Ponzi, mana ndị SEC eleghara anya ruo afọ itoolu. Dịka onye nkwutọ doro anya nke ndị na-achịkwa US, Harry na-elezi ugbu a anya nyocha na ụlọ ọrụ ịnshọransị dịka okwu ikpe aghụghọ aghụghọ ọzọ na-esote.
Site na kaadị Visa, ịnwere ike ịnụ ụtọ ego ruru 20% maka ịzụ ahịa na Global Trends Department Store! Lelee nkwalite kachasị ọhụrụ nke ụlọ ahịa ntanetị n'ịntanetị dịka Mytheresa na Giglio.com!
Microsoft, Apple, Alphabet, Facebook, Amazon, AMD, Caterpillar, Comcast, GE, Ford, Pfixer, Visa, UPS, Exxon Mobil, Twitter na ụlọ ọrụ ndị ọzọ kọọrọ nsonaazụ ha nke atọ.
Ọ dị mfe ịzụta ebuka, mana o siri ike ịzụta ebuka dị mma na-enweghị usoro a nwalere oge. Yabụ, kedu ngwaahịa kachasị mma iji zụta ma ọ bụ tinye na ndepụta nche ugbu a?
Ahịa ahia nwere ike soro ndị isi dịka Microsoft na Tesla. Na ntuli aka na-eru nso na coronavirus ikpe surged, nke a bụ nke kasị elu ego izu.
Nye onyinye ozugbo iji kwado ụlọ ọrụ UN gbara ọsọ ndụ, ka ndị gbara ọsọ ndụ nwee ike ịnweta ngwa ngwa ngwa iji gboo oge mmiri ozuzo wee zọpụta ha na ọdachi!
Kedu usoro ntinye ego nke siri ike nwa oge? Uto ulo oru mbo. Ndị ọkachamara na Wall Street kwenyere na ebuka nwere oke ibu na-eto eto na-egosipụta ụfọdụ akụ na-agba ume. Uto a nwere karia ihe di nso, aha ndi a gha enweta ezigbo nloghachi na 2020 na karia. Nke ahụ kwuru, n'ikwu opekata mpe, ịchọta ebuka dabara n'ụdị a nwere ike ịbụ ihe ịma aka. Ndị na-eme nnyocha kwenyere na otu atụmatụ bụ ịlaghachi azụ, lee anya na nnukwu foto, ma lekwasị anya na ụlọ ọrụ ndị nwere ogologo oge na-adabere na nnukwu ihe rụzuru kwa afọ. N’iburu nke a n’uche, anyị ji nchekwa data TipRanks chọpụta ọnụọgụ atọ na-eto eto nke ndị nyocha kwuru nke ọma. Ngwa ahịa atọ a enwetala nnukwu mmụba na 2020 ma dị njikere ịga n'ihu ịrịgo. Pennsylvania National Game Company (PENN) Nke mbụ, anyị nwere Pennsylvania National Game Company, nke nwere ma na-arụ ọrụ egwuregwu na ịgba ọsọ na egwuregwu egwuregwu vidiyo na United States. Aha ahụ arịgoro 146% kwa afọ, mana ụfọdụ ndị na-enyocha Wall Street kwenyere na a ka nwere nnukwu mmanụ ụgbọ ala. N'oge na-adịbeghị anya, PENN kwupụtara ọkwa nke atọ ya ụzọ tupu oge eruo, nke karịrị atụmanya. Companylọ ọrụ ahụ na-atụ anya oke uru maka nkeji iri na ise ka ọ bawanye karịa ihe ndabere 900, ma gbanwee EBITDAR ga-eto site na 5% kwa afọ, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ego enweta 10% kwa afọ. Onye nyocha ise nke ise bụ Joseph Greff gwara ndị ahịa na "JP Morgan Chase" kwuru, sị: "Mgbake ụlọ ọrụ egwuregwu na mpaghara na-aga n'ihu na Mee / June gara n'ihu ruo nkeji nke atọ, na ego dị mma karịa ka a tụrụ anya ya. Ozugbo egbochie ọchịchọ mgbe ịlaghachisịrị na nkịtị, yana ebe ọ bụ na arụmọrụ COVID gara aga abawanyelarị, mmefu arụmọrụ anaghị arịgo elu / arịgoro. Anyị buru ụzọ chee na mmụba a belatara. ” Ebe ahụ kwuru, Greif kwetara na nyere pụtara ìhè ngwaahịa price arụmọrụ, ụfọdụ ndị ọzọ na nnyocha na a Hapụ relegation n'azụ ". Otú ọ dị, ọ ka kwenyere na "uru na mkpali maka ọdịnihu". Ndị na-eme nnyocha kwuru, sị: “… E nwere ọgụ na-adịtụ n'echiche nke ndị ọchụnta ego. Anyị kwenyere na nke a dị mma maka ebuka ma ọ fọrọ nke nta ka ọ dị mkpa maka ebuka na-aga n'ihu ịrị elu; anyị kwenyere na ndị na-egwu egwuregwu ịgba egwu ọdịbendị na-emegbubeghị. Anyị kwenyere na ndị na-etinye ego na-enwe obi abụọ banyere ikike PENN na-asọ mpi na DraftKings, Fanduel, Caesars Entertainment, MGM / GVC, wdg. ego enweta ego ruru nde $ 950, ihe egwu nke asọmpi a belatara n'ime oke dị mkpa. ” Nke kachasị mkpa, PENN malitere ngwa ịkụ nzọ egwuregwu Barstool Sports na Pennsylvania. Greff kpọrọ mbupute a mmalite "na-agba ume n'ihe metụtara ma mpịakọta na mmefu ahịa," ọ gosikwara "ikike maka ụzọ pụrụ iche iji nweta oke." Na mgbakwunye, ike nke Barstool Sportsbook na-abawanye. Nke kachasị mkpa, Greff kwenyere na ịkụ nzọ egwuregwu ugbu a na gburugburu iGaming dị ka ịrị elu nke ahịa mpaghara na 1990s, mgbe steeti ndị nwere mmefu ego na-atụgharị gaa na isi mmalite ego, dịka egwuregwu ụgbọ mmiri iji nyere aka kpuchie mmefu ego ha. mpe. Na nke a, onye nyocha ahụ kwuru, sị: “Anyị kwenyere na steeti ọ bụla nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu atụ anya maka USSB na iGaming, na PENN ga-abụ otu n’ime ndị mmeri. Gba egwuregwu / egwuregwu ịkụ nzọ / iGaming nke ala na-amasị anyị na US ma hụ ohere maka uto. . ” Ọ bụghị ihe ijuanya na ili nọnyere ehi ndị a. Na mgbakwunye na ịnye ọkwa "oke oke", o setịkwara ọnụahịa ego nke $ 83 maka ngwaahịa ahụ. Ọ bụrụ na e mezuru ebumnuche a n'ime ọnwa iri na abụọ na-esote, ndị na-etinye ego nwere ike ịlaghachi 32%. (Iji lelee ndekọ egwu Greif, pịa ebe a.) Kedu ihe ndị ọzọ na Wall Street nwere ikwu? Itoolu zụtara, atọ ejiri na otu ere e nyere na ọnwa atọ gara aga. N'ihi nke a, PENN nwetara akara ngosi "ọkara ịzụta". Dabere na ọnụahịa ọnụahịa nke $ 76.77, ọnụahịa ahịa nwere ike ịrị elu site na 22% n'afọ ọzọ. (Lee Penn National Gaming ngwaahịa analysis na TipRanks.) Redfin (RDFN) Redfin malitere site na ebe nrụọrụ weebụ na-achọ oghere ma gbasaa ngwaahịa ya iji mee egwuregwu ezinụlọ, mwepụta na usoro nnabata ngwa ngwa na ịdị mfe. Na Wall Street, ụfọdụ ndị na-eche na aha ahụ abụghị naanị maka ịrị elu na ọchịchọ COVID, yana uru ya 113% kwa afọ bụ mmalite. Agbanyeghị RDFN kpochapụrụ amụma siri ike nke atọ n'ụzọ anọ, ndị ọchụnta ego nwere nkụda mmụọ. BTIG si Jake Fuller kwuru na ngwaahịa price nwere ike ịda n'ihi na "atụmanya dị elu na a agafeghị oke abawanye na ego ọnụ ọgụgụ bụ banyere 2%" na "ọkụ ọkụ investors agbasaghị ụgwọ a olu na-ada n'afọ iri na ụma, mgbe RDFN n'ezie lags n'azụ a na-atụ anya." Fuller kwenyere na RDFN abụghị nlebara anya nke ọtụtụ mmadụ, nke na-egosi na ndị na-etinye ego nwere ike ghara ịhụ nkwupụta ego enwetara. Agbanyeghị, ọ na-eche na Wall Street nwere ike hapụ akụkụ bụ isi nke mgbaghoju anya. Onye nyocha ise nke kpakpando ahụ kwuru, sị: "Ihe enwere ike ileghara anya ebe a bụ na RDFN emeela ka ọnụego ọrụ na-enweghị mmụba dị ukwuu na ọnụọgụ ntụgharị, nke ga-eme ka atụmanya maka nnukwu uru RDFN dịkwuo elu." Na nke a, ọ ga - A na-atụ anya na uru 2021 ga-abawanye site na 47%. Na-ele anya na ozi zuru ezu maka nkeji iri na ise ahụ, RDFN nwere nnukwu ọchịchọ na ọrụ ị nweta ụlọ na-eto 36% kwa afọ. Trafficzụ ahịa na ebe nrụọrụ weebụ na azụmahịa azụmahịa mụbara kwa ọnwa. Agbanyeghị, ekwesiri ịmara na isi ihu na-abata site na ntinye ego nke azụmahịa ọ bụla. Fuller kwuru, sị: "Nke a dị mkpa n'ihi na ọ na-egosi na ọnụego ọrụ a tụrụ anya ga-emecha nye onyinye." “Dika onu ogugu anyi si kwuo, ego ndi oru ala na enweta site na 1.68% nke GTV na uzo nke ato nke 2019 na nkeji nke abuo nke 2020 1.78% abawanye rue ihe ruru 1.85% na nkeji nke ato nke 2020. Onu ogugu ano di elu na-egosi akwa okporo ụzọ na mpaghara a. Agbanyeghị na o siri ike ịtụle nnọgidesi ike nke ịrị elu, ịrị elu ọnụ ahịa na oke uru uru ka mma ga-adigide “Fowler kwuru. N'ikwekọ na nchekwube ya, Fuller kwadoro ehi ndị ahụ, na-ekwughachi ogo ịzụta na ọnụahịa ahịa nke $ 65. Ebumnuche a gosipụtara obi ike ya na ikike RDFN ịrị elu site na 45% n'afọ ọzọ. (Iji lelee ndekọ ndekọ Fuller, pịa ebe a.) Mgbe ị na-akwaga n'akụkụ ndị ọzọ na Wall Street, echiche ndị ọzọ kewakwara nke ọma. N'ime ọnwa atọ gara aga, ekenyela 6, 5 jidesie na 1 ree. Dabere na Wall Street, RDFN bụ ọkara azụta. Ọnụ ego ọnụahịa nke $ 50 pụtara 11% elu. (Lee Redfin ngwaahịa analysis na TipRanks) Vertiv Holdings (VRT) Dị ka otu n'ime ngwaike nke ụwa, ngwanrọ na ndị na-enye ọrụ, Vertiv Holdings enyerela aka ịkwalite ahịa jikọrọ ọnụ nke sistemụ dijitalụ, nke ọnụ ọgụgụ dị oke mkpa data ahụ chọrọ ebunye ya, nyocha ya, hazie ya ma chekwaa ya. Wall Street kwuru na ọ rịgoro 71% rue afọ a, enwere ike ị nweta ọtụtụ uru. Ọbụna ma ọ bụrụ na ọnụahịa ego na-arị elu ngwa ngwa, Wolfe Research nyocha Nigel Coe ka kwenyere na ọnọdụ ihe ize ndụ / ụgwọ ọrụ dị mma. Ọ kọwara, sị: "Anyị kwenyere na Vertiv bụ ụdị ndị na - adịghị ahụkebe nwere ike ịdọta ọtụtụ ndị na - etinye ego: otu ụlọ ọrụ na - eto eto nke nwere ike ịnye uto uru mara mma na mbelata ma ọ bụ n'okpuru ọrụ nke ndị isi otu ọrụ." N'ihe banyere VRT N'okporo ụzọ na-eto eto, isi ahịa ya bụ isi data na nkwukọrịta. Oghere ndị a bụ ebe Coe na-atụ anya inweta uto na 2020 na 2021, yana ọghọm dị ogologo oge na-eweta site na mmụba na-aga n'ihu na ike data na nkwalite 5G. Tụkwasị na nke a, site na mbọ iji na-akwụ ụgwọ a na-akwụ ụgwọ site na nkwalite arụmọrụ dị iche iche ma na-ebelata mgbagwoju anya nhazi, njikwa gosipụtara ụzọ iji gbasaa uru na isi ihe ndabere 500. "Nke a bụ edemede nke onye isi oche David Cote tinyere nke ọma n'oge ọ nọ na Honeywell, nke na-eme ka anyị kwenye na enwere ike itinye akwụkwọ edemede yiri nke ahụ na Vertiv," ka Cohen kwuru. Okwesiri ighota na VRT wepuru na nkeji nke abuo nke 2020, ya na ugwo nzi ihe ruru ijeri US $ 2.1 na ugwo net / EBITDA ruru ugboro 4.2. Ọbụna na njedebe dị elu nke oke a, Coe kwenyere na mpempe akwụkwọ nwere ike wepu ngwa ngwa. Iji mezuo nke a, ọ na-eche na site na 2023 ọnụọgụ ụgwọ / EBITDA ruru ugboro abụọ, mgbe ahụ isi ego fọdụrụ ga-erute ijeri US 1 ijeri. “Anyị anaghị eche ugbu a na Vertiv bụ akụkọ ntinye isi obodo doro anya, mana nke a nwere ike ịdị elu n’ime oge nke 2022/23-anyị nwere ike ịhụ ọrụ nnweta iji bulie ikike ya na ngalaba nkesa ike yana oyi akwa DCIM. Nhọrọ ndị ọzọ nwere ike ịgụnye mmiri mmiri nke akwụkwọ ikike ego (ndị a na-egosi ugbu a na ngụkọta ọnụọgụ ọnụọgụ ọnụ anyị) na ụzọ esi kesaa nkewa, nke ga-eme ka ohere ịnweta ụlọ ọrụ gbasaa. Anyị enweghị ike ileghara eziokwu ahụ anya na ọtụtụ akụrụngwa eletriki buru ibu Akụkụ nke mmekọrịta mmekọrịta siri ike nke ndị ahịa na-azụ ahịa, ndị a esonyeghị na ndị dị mkpa na data data. ” Ihe niile VRT mere ka Coe kwenye ikwughachi ọkwa ya karịa. Mgbe ọ na-akpọ nhọrọ, ọ setịpụrụ ọnụahịa nke $ 23, na-egosi ikike elu 22%. (Iji lelee ndekọ egwu Coe, pịa ebe a) Ndi nyocha ndị ọzọ kwenyere? ha bụ. N'ime ọnwa atọ gara aga, naanị ebipụtala ogo 4 "zụta" ziri ezi. Ya mere, ozi ahụ doro anya: VRT bụ ihe siri ike ịzụta. Nyere na ọnụọgụ ego ọnụahịa bụ $ 20.75, ọnụahịa ahịa nwere ike ịrị elu site na 10% n'afọ ọzọ. (Lee Vertiv Holdings ngwaahịa analysis na TipRanks) Nkwuputa: Echiche ndị e gosipụtara n'isiokwu a bụ naanị ndị isi nyocha. Ọdịnaya bụ maka ntụnye naanị. Tupu ịmebe ego ọ bụla, ọ dị ezigbo mkpa ịme nyocha nke aka gị.
A ga-ewepụta ego mbata n'izu a na akụkọ data akụ na ụba n'izu a, ọtụtụ akuko FAANG na-akọ mgbe emechiri na Tọzdee.
N’izu na-agwụcha ọnwa Ọktọba 22, ọnụego ọmụrụ nwa dabara na ndekọ obere. A na-atụ anya na ndọrọ ndọrọ ọchịchị COVID-19 na ndọrọ ndọrọ ọchịchị America ga-anọgide na-enwe mmetụta n’izu a.
Untdị Suntory pụrụ iche nke azụ azụ "DHA & EPA + Sesame Ming E", 4 capsules otu ụbọchị, nwere ike iwepu nsogbu obi, weghachite ume imeju, hie ụra nke ọma, ma bụrụ ihe egwu dị n'obodo mepere emepe! 10% kwụsịrị maka obere oge, echefula ya!
AMD (AMD) akuko nke ugwo nke ato nke ato ka ezubere ka eweputa ya mgbe emechi na Tuesday, nke bu oge di nma maka ulo oru semiconductor. The Wall Street Journal kọrọ na AMD (AMD) na-ezube ịbawanye azụmahịa ya site na nnweta (XLNX) (XLNX). N'otu oge ahụ, onye kachasị asọmpi (INTC) nọ na-arụsi ọrụ ike iji nọgide na-arụpụta teknụzụ mmepụta ọgbara ọhụrụ chọrọ iji rụpụta semiconductors dị elu.
* Akwụkwọ akụkọ Barron nke izu ụka a na-enyocha atụmanya nke ndị dike ihe ọ beụicụ na-aba n'anya n'oge ọrịa na-efe efe. * Isiokwu ndị ọzọ na-ekwu okwu na-atụle ịrị elu na ahịa ahịa na ebe ịchọta uru ọrụ. * Tụkwasị na nke a, enwere atụmanya maka ntụkwasị obi itinye ego ụlọ na ụlọ ọgwụ, ndị na-ere ahịa nnukwu ụlọ ahịa, na teknụzụ metụtara ọrịa kansa. Akụkọ mkpuchi Andrew Bary "Ihe kpatara Coca-Cola Ga-apụta" na-egosi na ụlọ ọrụ ahụ tara ahụhụ kachasị na ọrịa ahụ bụ Coca-Cola (NYSE: KO). Agbanyeghị, ka ndị mmadụ na-alaghachi n'ụzọ nkịtị na ụwa nke ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, mmetụta zuru ụwa ọnụ nke nnukwu ihe ọ beụverageụ si n'ọtụtụ mba nwere ike ime ka ọ gaa elu dị elu. Reshma Kapadia si "Ndị a abụrụ ahịa ebuka nwere ike mpi American technology Refeyim", o kwuru, sị, mgbe a afọ iri nke iju, abụrụ ahịa ebuka na-ebili. Ọtụtụ ụlọ ọrụ ntanetị na ụlọ ọrụ ahụike na ahịa esenidụt ka na-aga n'ụzọ na-eto eto, na-enye nnukwu ohere. Ọ bụ Alibaba Group Holdings Limited (NYSE: BABA) kwesịrị ịhụ? Na "Ego Nkwado Ahụike Atọ Iji Reap Laghachi na ngalaba Ahụike", Darren Fonda (Darren Fonda) gosipụtara na ụlọ ọrụ ntụkwasị obi nke ụlọ akụ na-ahụ maka ụlọ ọrụ ahụike nwere ohere maka uto. Chọpụta ihe Barron nwere mmasị banyere ndị dọkịta Realty Trust (NYSE: DOC) na ọtụtụ ndị ọgbọ ya. NextEraEnergy Inc. (NYSE: NEE) elu 26% afọ a, dịka "8 iji nye ngwaahịa nchekwa nchekwa" yana mmụba na-aga n'ihu nke nrụpụta ", onye edemede: Lawrence · C · Strauss (Lawrence C. Strauss). Mana ọzọ na ngalaba ọrụ ịba uru, enweghị ụkọ mmepụta mbelata yana ụfọdụ usoro nchedo ihu. Xcel Energy Inc. (NYSE: XEL) bụ naanị otu nhọrọ Barron. Na Eric Savitz si “Ahapụla Big Technology Ebuka. "A na - ekwubiga okwu ókè", gịnị kpatara achọpụtara na ọ bụrụgodi na enyo enyo a na - ebulite ya n'okpuru nyocha usoro iwu siri ike, ihe kpatara ya ka bụ Apple (NASDAQ: AAPL) na Microsoft (NASDAQ: MSFT)) karịa nduhie na iji ike emegbu mmadụ. Leekwa: Benzinga si ehi ahịa nke izu: Boeing, Netflix, Pfizer, wdg. Jack Hough kwuru "Lookingchọta ezumike ppingzụ ahịa maka adịgboroja", tụlere ihe mere Nọvemba nwere ike ịbụ oge kwesịrị ekwesị iji ree ọghọ ụtụ isi, dị ka Kohl's Corp. (NYSE: KSS) na Macy's Inc. (NYSE: M). Nike (NYSE: NKE)? Nke mbu, ahihia ndi oru ugbo (NASDAQ: SFM) bu onye mmeri nke COVID-19, na onye meriri COVID-19. Ya mere, Teresa Rivas si “Sprout Ndepụta Ngwaahịa dị njikere Ezi rebound.” Mgbe ọ nwụsịrị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụzọ n'ụzọ anọ nke uru ya n'ime ọnwa atọ gara aga, ọ bụ onye ọrụ ahịa ahịa ahịa nke Phoenix ga-alaghachi? Na "nchekwube banyere Tesla, telemedicine na genomics mgbanwe" Na, Emily Liu kesara ihe mere ARK CEO itinye ego bụ nwa akwụkwọ nke ihe ọhụrụ na-akpaghasị, ihe kpatara Tesla (NASDAQ: TSLA) ga-ahapụ Uber Technologies Inc. (NYSE: UBER) na ájá na-eso ndị ọzọ edozi. Bill Alper Bill Alpert si "Cancer Conference Ka Ignite Ndị A Biotech Ebuka." Na mkparịta ụka ENA nke afọ a, ndị na-eme nnyocha banyere kansa nwere nzukọ na ntanetị iji lelee data ọhụrụ banyere ọgwụ ndị ọtụtụ ụlọ ọrụ biotech na-anwale. Mụta maka Barron Gini mere ị ga-eji chee na Mirati Therapeutics Inc. (NASDAQ: MRTX) ga-abụ otu n’ime ụlọ ọrụ elele anya. Na Barron Weekly a: * Ego ole ka ị ga-akwụ dịka atụmatụ ụtụ isi nke Biden na Trump si kwuo * Otu atụmatụ ụtụ isi onye isi ala ga - esi nyere aka ma mebie akụ na ụba - ihe oke ikuku nwere ike ịpụta maka ahịa agbụ * Ihe kpatara 2021 ga - ihe ịma aka nye ndị na-etinye ego * Ihe kpatara na ụlọ ọrụ ndị ji teknụzụ dị oke ọnụ ahịa bara uru ilele anya * Diesel Ihe na-egosi na ahịa nwere ike izipu na akụ na ụba * Ọgụ a na-esote agha ụgbọ ala eletrik na-esote * Bụ leveraged buyouts rebounding * Is Chinese bonds as safe as national bonds * oge iji nwaa ahia ahia Thai n’oge edere, onye edemede ahụ nọ na ngwaahịa ndị dị n’elu Ọnọdụ. Soro Benzinga na Twitter maka ozi ọhụụ kachasị ọhụrụ na echiche azụmaahịa. Lee ozi ndị ọzọ gbasara Benzinga * Pịa ebe a iji lelee nhọrọ nhọrọ Benzinga * ahịa ehi nke Benzinga n'izu a: Boeing, Netflix, Pfizer wdg. * Ihe izu ndị ama ama gara aga n'izu gara aga: Carnival, Citigroup na ndị ọzọ (C) 20 20 Benzinga.com. Benzinga anaghị enye ndụmọdụ ndụmọdụ ego. ikike niile echekwabara.
Azụmahịa Trifecta ga-amata ebuka ebu ọnụ na Wednesde ọ bụla, enwere ike ịnwe ohere itinye ego na-atọ ụtọ n'oge dị mkpirikpi. Iji nyocha teknụzụ nke eserese ngwaahịa ndị a, yana ebe o kwesiri, dabere na omume na ogo nke TheStreet's Quant Ratings, anyị wepụrụ aha ise ahụ. Ọ bụ ezie na anyị agaghị atụle nyocha bụ isi, anyị nwere olile anya na isiokwu a ga-enye ndị nwere mmasị na ngwaahịa nwere ezigbo mmalite maka ịga n'ihu n'ụlọ na aha.
Wụsa ntụ n'oké osimiri ma ọ bụ ubi ncheta iji kpofu ntụ na ụzọ omume enyi na gburugburu ebe obibi. Mee atụmatụ n'ihu, gwa ndị ezinụlọ gị ihe ị chọrọ, ma denye aha na Central Register nke Green Funerals.
Onye pensụl pensụl Dutch PGGM gbara okpukpu abụọ na ntinye ego ya na PayPal ma zụta mbak nke Cisco na Activision na nkeji atọ. O bebiri ngwaahịa Qualcomm.
Onye guzobere Alibaba, Jack Ma kwuru na Satọdee na aha abụọ nke ụlọ ọrụ Fintech nke China bụ Ant Group ga-abụ nke kasị ukwuu n'ụwa dabere na ọnụahịa edozi na abalị Fraịde. O kwuru na Summit Bund Summit na Eastern Financial Center nke New York: "Nke a bụ oge mbụ na e kpebie ọnụahịa nke nnukwu ndepụta na akụkọ ihe mere eme mmadụ na mpụga New York City." Site na nkwado nke nnukwu e-commerce China bụ Alibaba, Ant na-ezube Ọ ga-edepụta ya na ahịa STAR na Hong Kong na Shanghai n'izu ahụ.
PayPal na-emeghe network ya na Bitcoin na cryptocurrencies ga-agbanwe iwu nke egwuregwu ahụ, mana akụkọ a na-ezobe ozi ka mkpa ma dị mkpa.
Hang Seng ọhụụ ọhụụ a na-akwụ ụgwọ ụtụ isi na-enye afọ 10 nke mgbakwunye ego agbakwunyere ma na-ekwe nkwa 1.73% -2% nke nrụpụta ego n'ime. Ọ na-ewe ihe dịka 10 nkeji iji tinye akwụkwọ maka mkpuchi ịntanetị ma mee ihe ozugbo.
Nsonaazụ na uru abụghịzị ihe kachasị mkpa maka ndị na-etinye ego ịzụta ma ọ bụ nọrọ na ụlọ ọrụ mmanụ. Agbanyeghị nloghachi ka bụ isi, ndị ọchụnta ego ka na-achọ mgbanwe tupu 2020
(Bloomberg) -N’ihi Leon Black, ihe na-akawanye njọ. N'ime izu gara aga, nnukwu ụlọ ọrụ ntinye ego nke Black, Apollo Global Management Inc. (Apollo Global Management Inc.) chere otu nsogbu ihu mgbe nke ọzọ gasịrị, ya bụ, ya na onye a mara ikpe na-emejọ nwoke Jeffrey Epstein (Jeffrey Epstein) Onyeisiala Mmekọrịta nke iri afọ. Ndi otu ndi isi ya nyere iwu ka Black nyocha n'onwe ya. Ego ezumike nka nke Pennsylvania kwụsịrị nkwụnye ego ọhụrụ-Connecticut mere otu ihe ahụ. Otu onye ndụmọdụ dị mkpa - onye nche ọnụ ụzọ na-emezu ihe ruru ijeri $ 160 ijeri ndị na-etinye ego na-agba ndị ahịa ume ka ha yigharịa, ebe onye ọzọ na-atụle ime ihe yiri ya. Ndị ahịa ndị ritewororịrị ụgwọ kacha mma Wall Street ruo ọtụtụ afọ na-echegharị mmekọrịta ha na Apollo. Na mbido ọnwa a, akụkọ dị na New York Times kpaliri nyochagharị Epstein. · Maxwell (Ghislaine Maxwell) kaabeghi ma nyekwa uche ọhụrụ. Dabere na ndị maara nke ọma n'okwu a, ụfọdụ ndị ahịa ekwenyeghị na nyocha nke ụlọ ọrụ iwu Dechert LLP mere zuru oke iji kpochapụ aha Black, na ịkwụsị ego ọhụrụ nwere ike ibute Apollo ka ọ na-agba mbọ ịga n'ihu. Nweta $ 20 maka ọtụtụ ego ọhụrụ. Ọgba aghara a na-ebute n'ọrịa ahịa kredit bụ ohere itinye ego nke ụlọ ọrụ ahụ, nke amara maka ịzụrụ azụmaahịa ndị nwere nsogbu. Ndị maara ihe ahụ kwuru na Eprel na Apollo na-achọ iji uru ọgba aghara ahịa na itinye ego na ụgwọ onwe. Nsogbu ndị na-eto eto Black na-egosipụta mgbanwe na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ụwa itinye ego, yana nnukwu ego na-enwewanye mmetụta na gburugburu ebe obibi na ọha mmadụ. Ọchịchị dịkwa ezigbo mkpa. Ọhụụ ọhụrụ ahụ pụtara na ọbụlagodi ihere, ọbụnadị atụmanya nke ịlaghachi ezigbo ego nwere ike ọ gaghị adọrọ mmasị zuru oke. "Ọ bụ ezie na ịrụ ọrụ ga-abụ ihe dị mkpa mgbe niile, ọ bụghị naanị ya," Gerald O'Hara, onye nyocha na Jefferies Financial Group Inc kwuru. "N'ụzọ ụfọdụ, anyị dị njikere ịchụ arụmọrụ maka ọfụma na ụlọ ọrụ na-eme omume ọma. ” Bloomberg kwuru na Fraịde na onye ndụmọdụ ndụmọdụ ego Aksia gwara ndị ahịa ka ha ghara itinye ego na Apollo. Connecticut kwuru na ọ ga-akwụsị itinye ego ọhụrụ na ụlọ ọrụ ahụ. Na mbido izu a, ndị Pennsylvania Public Schools Staff Retirement System kwuru na ọ ga-adịtụ nwa oge ịkwụsịtụ itinye ego na Apollo, na onye ndụmọdụ Cambridge Associates na-atụle ịghara ịkwado ụlọ ọrụ na ndị ahịa ezumike nka na ndị ezumike nka. Banyere ozi ọma na ejidere Epstein n'afọ gara aga, nchegbu ndị investors nwetaghachiri site na akụkọ New York Times. Mgbe a mara ya ikpe maka ịkpọrọ nwa agbọghọ dị afọ iri na ụma maka ịgba akwụna na 2008, o nyefela Epstein opekata mpe 50. Dollar. Edemede ahụ eboghị Black ebubo imebi iwu. Kemgbe e bipụtara akụkọ a na October 12, ọnụahịa ngwa ahịa Apollo adaala ihe ruru 12%. "Anyị kpebisiri ike imeziwanye nghọta," Apollo kwuru na nkwupụta na Fraịde, na-achọpụta na Black na-ekwurịta okwu mgbe niile na ndị na-etinye ego. "Ọ bụ ezie na Apollo esoghị Jeffrey Epstein na-azụkọ ahịa, Leon rịọrọ nyocha nke onwe ya na mpụga nke mmekọrịta mmekọrịta mbụ ya na Maazi Epstein." Black gwara Apollo n'ọnwa a Akwụkwọ ozi sitere n'aka onye mmekọ ole na ole kwuru na ọ na-akwa ụta nke ukwuu itinye aka na Epstein. . Black kwuru na ọ chigharịkwuuru ya maka ụtụ isi, atụmatụ ụlọ na ọrụ ebere, na ọ nweghị ihe dị na akụkọ New York Times na-emegide nkọwa ndị gara aga banyere mmekọrịta ya. Ọzọ: Leon Black's Epstein jikọtara mgbasa ozi ịchụ ego nke na-eyi egwu Apollo Investors kpamkpam ebipụ na Apollo n'ihi na ego nkwụnye ego nke onwe na-agbachi isi obodo ruo ọtụtụ afọ-ọtụtụ ndị dị njikere ịlaghachi dị elu N'okpuru ebumnuche nke itule. Ndị ọchụnta ego atọ ahụ, ndị achọghị ka akpọ aha ha, kwuru na ọ gwụla ma nchoputa nke nyocha ahụ jọgburu onwe ya, ndị ahịa nwere ike mechaa họrọ ịchọ ebe ọzọ. N'ihi mmesapụ aka nke ụlọ ọrụ ahụ, nkwụsị ndị ahịa na-adọrọ mmasị nke ukwuu. Bloomberg kọrọ na Jenụwarị na Apollo si flagship nzuzo hara nhatanha ego meghere ka ndị investors na 2001, na-enwe kwa afọ mkpụrụ nke 44%, ma ndị na-achụ ego bụ ndị na-achọ itinyekwu ego na nzuzo hara nhatanha ga-a nloghachi May họrọ nyefee ya ndị ọzọ ebe. Onye ọlụlụ Sarah Sandstrom (Sarah Sandstrom) kwuru, sị: “Nke a bụ asọmpi isi obodo na-asọ mpi, ma anyị na-aga n’ihu ịhụ ihe dị n’usoro nchịkọta ego. Ihe a bụ, n'ọtụtụ ụzọ, ọ karịrị usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ọ bụghị usoro ego. " Na Campbell Lutyens, ụlọ ọrụ ahụ na-enyere ndị ụlọ ọrụ nha nha onwe ha kpatara ego aka. "Are na-agwa gị onwe gị akụkọ na iwulite mmekọrịta na investors." (Okwu agbakwunyere Blake nke gara aga na paragraf 12.) Maka edemede ndị dị otú a, biko gaa na Bloomberg.com ma denye aha ugbu a maka isi mmalite akụkọ azụmaahịa a tụkwasịrị obi. © 2020 Bloomberg Records
Irela ezumike nká nwere ike ọ bụghị nchegbu ọtụtụ ndị na-eto eto, mana o kwesiri. Nke a bụ n'ihi na mgbe ọtụtụ iri afọ gachara, obere itinye ego taa nwere ike ịbawanye ụba n'ọdịnihu. Roth IRA bụ ezigbo mmalite.